Kooxo Burcad Koonfur Afikan ah ayaa xalay Gudaha dalkaas waxaa ay dil iyo dhaawac ugu geysteen muwaadiniin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Soomaalida Ganacsi ahaan u tegay dalkaas, iyaga oo goobta ka basaday.
Soomaalida la dilay ayaa waxaa lagu Magacaabi jiray C/xakiin Jeelle iyo Mikaa’iil Bitoow, waxaana la sheegay in lagu dilay Goob Ganacsi o ku taal Magaalada Port Elizabeth ee dalkaasi Koonfur Afrika.
Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in Kooxaha Burcadda ah ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ku weerareen goobtooda Ganacsiga, sidoo kalena ay weerarkaas ku dhaawaceen Wiil Dhalinyaro ahaa oo Goobta uu werarka ka dhacay ku sugnaa.
Ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur Afrika ayaa sida caadada aheyd waxaa ay tageen halka uu dilka dhacay, hayeeshee kuma guuleysan inay gacanta ku dhigaan kooxihii dilka u geystay Muwaadiniinta Soomaaliyeed.
24-kii Saacadood ee la soo dhaafay ayaa Gudaha dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay 4 dhalinyaro Soomaaliyeed ah, waxaana dilalkaas weli ka hadlin Madaxda dalalka Koonfur Afrika & Soomaaliya, iyada oo horay loo dilay muwaadiniin farabadan oo Soomaaliyeed.
Previous articlePuntland iyo Galmuudg oo Go’aano culus soo saaray
Next articleGuddiyo si hor dhac ah uga wada hadlaya shirka uu ku baaqay Farmaajo